विद्यार्थीसंग लिईएको अतिरिक्त शुल्क मेडिकल कलेजले फिर्ता गर्नै पर्छ : प्रधानमन्त्री – Nepali Health
विद्यार्थीसंग लिईएको अतिरिक्त शुल्क मेडिकल कलेजले फिर्ता गर्नै पर्छ : प्रधानमन्त्री
२०७६ मंसिर १० गते ९:०१ मा प्रकाशित
काठमाडौँ, १० मंसिर । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विद्यार्थीहरुसंग लिइएको अतिरिक्त शुल्क मेडिकल कलेजहरुले फिर्ता गर्नै पर्ने बताएका छन् । सोमबार राती कान्तिपुर टेलिभिजनको फायरसाइडमा बरिष्ठ पत्रकार भुषण दाहाललाई दिएको विशेष अन्तरवार्तामा उनले विद्यार्थीसंग लिइएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
यस्तो छ मेडिकल कलेजको विषयमा गरिएको कुराकानी :
प्रधानमन्त्री ज्यू यहाँहरु सुशासनका कुरा गर्नुहुन्छ तर स्पेशली मेडिकल विद्यार्थीहरु देशभर आन्दोलनमा छन्, सरकारले फिर्ता गर भनेको अतिरिक्त शुल्क उठाइएको छ भनिएको छ, त्यो फिर्ता गर्न पनि सञ्चालकहरु अटेर गरेर बसेको अवस्था छ, विद्यार्थी माथि दमनका समाचार पनि सुनिएका छन् कसरी हेरिरहनु भएको छ ?
यो बढी लिएका रहेछन् मेडिकल कलेजहरुले । अहिले विद्यार्थीहरु पहिले किन तिरे अहिले किन तिर्न मान्दैनन् ? अहिले किन बढी लिएको फिर्ता गर्न छ ? अहिलेको सरकार एउटा थितिको सरकार हो र यसले थितिमा चल्छ भन्ने छ । पहिले किन तिरेको ? पहिले किन आन्दोलन नगरेको ? किनभने आन्दोलनमा उत्रिनु बेकार छ भन्ने हुन्थ्यो । अहिले आन्दोलनमा उत्रिनु बेकार छैन । सुनुवाई हुन्छ । त्यसकारण उनीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । उनीहरुको विश्वास छ कि सरकारले उनीहरुलाई बढी तिर्न लगाउँदैन ।
जुन अड्डी सञ्चालकहरुले गरेका छन् साँचो बुझाउँदैछन् भनेर, सरकारको प्रतिक्रिया के हुन्छ ?
साँचो सरकारलाई बुझाउँछौँ भनेको मैले सुनेको छैन । यदि बुझाउँछु भन्नुभयो र बुझाउँनु भयो भने हामी व्यवस्था गरौँला ।
फिर्ता लिन सकिन्छ ? साँचो लिन सकिन्छ ?
सकिन्छ । बुझाउनु भयो भने के गर्ने ? त्यो व्यवस्था हुन्छ । तर उहाँहरुले त्यसो भन्नु हुन्न होला । पैसा बढी लिन नपाए साँचो बुझाउने हो भने, विद्यार्थी ढग्न नपाए साँचो बुझाउने हो भने । त्यो बेग्लै कुरा हो । उहाँहरुले त्यसो भन्नु हुन्न होला । शुल्क फिर्ता गर्नै पर्छ उहाँहरुले ।
उसो भए सरकार चाँही विद्यार्थीहरुको पक्षमा छ ?
न्यायको पक्षमा छ । स्वभाविक रुपमा सरकारले जो तोकेको शुल्क हो त्यो भन्दा बढी लिन पाइदैन । जो सहमति भएको थियो त्यो भन्दा बढी लिन पाइदैन । सरकारले तोकेकोमा उहाँहरुले तत्काल असहमति किन जनाउनु भएन ? तत्काल त्यसमा किन मञ्जुर गर्नुभयो । यस अनुसार विद्यार्थी भर्ना गर्छौ र पढाउँछौँ किन भन्नुभयो ? यदी मर्का परेको भए सरकारसंग सम्वाद किन गर्नु भएन ? खुसुक्क विद्यार्थीलाई अप्ठेरोमा पारेर लुटने काम किन गर्नुभयो । त्यसकारण यसमा म केही सुनिरहनु पर्छ भन्ने ठान्दिन । सरकारले जे निर्णय गरेको थियो । जे सहमति गरेको थियो । त्यसमा सरकार दृढ छ । त्यस अनुसार फि उठनु पर्छ । त्यस अनुसार लिनुपर्छ । तोकिए भन्दा बढी लिएको शुल्क फिर्ता गर्नुपर्छ । अब बढी लिनु पाइदैन ।
काठमाडौँ उपत्यकामा थप ९२ जनामा कोरोना संक्रमण
चौबिस घण्टामा देशभर थपिए ३८० जना कोरोना संक्रमित, संक्रमितको संख्या २२ हजार ९७२
सरकारी चिकित्सक संघमा डा. रबिन खड्का नेतृत्वको प्यानल विजयी
सूर्तिजन्य पदार्थको नियन्त्रणमा सहयोग पुर्याउन बृहत अध्ययन् हुँदै
प्रधानमन्त्री ओलीलाई एपेन्डीसाइटिस, शल्यक्रिया गर्ने तयारी